Njodzi Njanji Kufamba neVashanyi - Pane Mukana Here?
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kufamba kwekushanya » Njodzi Njanji Kufamba neVashanyi - Pane Mukana Here?
Kufamba kwekushanya • Australia Kuputsa Nhau • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Kanada Breaking News • China Kuputsa Nhau • Entertainment • Hospitality Industry • nhau • Vadivelu Comedy Rwanda Breaking News • ushanyi • Kufamba Wire Nhau • USA Kuputsa Nhau
CN Tower EdgeWalk - Mufananidzo wakakomberedzwa necntower.ca
rakanyorwa Srilal Miththapala - eTN Sri Lanka
Zvemagariro venhau, uye kunyange mamwe enhau akajairwa ese aive buzz pamberi penjodzi yeCOVID, apo mimwe mifananidzo yevechidiki vashanyi vaviri vakaonekwa vakarembera kunze kweSri Lankan kumusoro kwenyika chitima mukusiya ngochani, vachiona nguva inonakidza.
Paive nemakakatanwa anopisa nezvenzira iyi yekusimudzira yeSri Lanka, nevanhu vazhinji vachitaura nezve njodzi dzetsika dzakadai.
Pakanga paine kunetsekana kuti kwaizounza kushambadzira kwakaipa kuSri Lanka kana chimwe chinhu chine njodzi chikaitika.
Ichi chikamu chechitima chakakwira munzira yekumusoro-nyika ingangoita imwe yenzvimbo dzinoyevedza dzechitima pasi rese.
Uye chaizvo chaizvo saka ndinofungidzira. Ini pachangu ndaive mumwe akabatana nekorasi akataura zvine simba kupokana neizvi.
Zvisinei ndichifunga kunze kwebhokisi, ndakazofunga - Tinogona kugadzira mukana pano?
Icho chiitiko chitsva uye anonakidza-anotsvaga mushanyi wanhasi
Hapana mubvunzo kuti pane chikamu chitsva chekunzwisisa, mudiki, ruzivo uye kutsvaga kutsvaga vashanyi, kubuda uye kufamba pasirese. Ivo vane internet uye vezvenhau savvy, vachitsvaga zvimwe zvinonakidza uye zvinonakidza zviitiko, uye kazhinji vanoziva zvakanyanya nharaunda. Ivo vanowanzoonekwa vachiongorora-ye-yakarohwa-track mazororo, akarongwa ega ega zvichienderana nezvavanoda uye zvavanoda.
Kuburikidza nemazera, vanhu vanga vachisundira miganho yekutsvaga: takakunda ivhu, gungwa nenzvimbo. Isu takawana zvishamiso kusvika zvino zvisingazivikanwe zvepasi redu nenyota yedu isingadzorwe yezivo.
Vashanyi havana kusiyana. Kuti vabve pahupenyu hwavo hwezuva nezuva hunonetsa, vanotsvaga chimwe chinhu chakasiyana, kunyange kuenda kunzvimbo dzine hukasha kana dzine njodzi kuti vanzwe kunakidzwa kwekuwanikwa uye kunzwa kwekunakidzwa. Hapasisina imba yakachena yehotera ine huwandu hwenzvimbo, chikafu chakanaka, uye kumwe kupenya kwezuva kwakaringana kune mushanyi.
Zvinoenderana nebooking.com, kushuvira kwezviitiko pamusoro pezvinhu zvekunyama kuri kuenderera mberi nekufambisa chishuwo chevafambi chekuwedzera kushamisa uye kusingakanganwike nzendo: 45% yevafambi vane runyorwa rwebhaketi mundangariro. Kazhinji vanogona kuoneka pane bhaketi rondedzero vanotsvaga mafaro vanoda kushanyira paki inozivikanwa yepasirese, vafambi vari kutsvaga kuenda parwendo rwechitima, kana kushanyira nzvimbo iri kure kana yakaoma.
Dhiraivha-yekudzora dzidziso mu psychology inomisikidza kuti imwe haina kumbobvira yave mumamiriro ekuzadzikiswa zvakakwana, uye nekudaro, kune nguva dzose zvinotya zvinoda kugutsikana. Vanhu nedzimwe mhuka vanozvipira kuwedzera kukakavara nekutsvaga kwavo kusingazivikanwe nharaunda, kuzvidzikisira kushushikana, nekubuda munzvimbo dzavanonyaradza. Izvi zvinovapa pfungwa yekubudirira uye kugutsikana kwavo.
Izvo zvinonakidza zvisingazivikanwe, mafambiro uye adrenaline kumhanyisa inokwezva vafambi.
Chii chakaitwa nedzimwe nyika?
Sezvambotaurwa, nyika zhinji dziri kusimukira zvakasarudzika, zvisingakanganwike, uye zvinonakidza zviitiko mukupa kwavo kwechigadzirwa. Aya mashoma anotsanangurwa pazasi.
Famba uchitevedza Sydney Harbor Bridge
Mapoka madiki anotorwa achifamba achitevedza yakakura, arched simbi yakarongedzwa Sydney Harbor Bridge. Iyo inoshamisa 360 deg. maonero kubva kubhiriji, 135 metres pamusoro pevhu, chengarava, uye iri padyo imba yeSydney Opera, nepo ichinyatso kuoneswa kumatenga chiitiko chisingawanzo uye chinonakidza.
Inochinjisa Dhiragoni Cliff skywalk, Zhangjiajie, China
Kumusoro kuchamhembe kwakadziva kumadokero kweChina dunhu reHunan, vashanyi vanogona kutora nhanho yekuzorora munzira yekunamatira yakanamirwa kuTianmen Mountain - 4,700 tsoka pamusoro pevhu.
Iyo girazi-yepasi nzira yekufamba yakareba kupfuura mazana matatu emamita uye ingangoita mashanu emamita upamhi, ichipa chiitiko icho chinonzi chinonakidza uye chinotyisa.
Iyo CN Tower EdgeWalk, Canada
Kukwezva kureba muToronto kunoita kuti vanhu vamire chaipo pamucheto peCN Tower uye varere pamusoro. Ndiyo denderedzwa repamusoro soro repasi rose, kufamba-famba usina mawoko pahafu yemamita-upamhi yakatenderedza pamusoro pePod's main pod, 1.5 metres, 356 nyaya pamusoro pevhu. EdgeWalk chiitiko cheCanada siginecha Chiitiko uye yeOntario Siginecha Chiitiko.
Gorilla Safaris muRwanda
Mikana yakasiyana siyana yekufamba muRwanda neUganda inokutendera kuti upinde musango kunotarisa mumaziso emaGorilla munzvimbo yavo yepanyama. Iyo yakasarudzika yakasarudzika African safari ruzivo. Ino nguva inosiya inogara uye isingakanganwike pfungwa ichiuya padyo nemhuka huru yemusango.
Aya angori mashoma. Saka patova nemhando dzakasiyana dzeakasiyana, evashanyi zvinokwezva vashanyi pasirese.
Kuchengetedza - iyo iri pamusoro mamiriro
Zvese izvi zvinotsvaga mafaro uye zvinoita sekunge zvine njodzi zvekushanya zvine imwechete dhinomineta isingambokanganisa - chengetedzo.
Kuchengetedza kwakanyanya kukosha mune zvese izvi zviitiko uye kunoenderana nekuomeserwa kwekutarisa uye kuongorora nguva nenguva. Vashandi vese vanotungamira uye vanoraira vashanyi vanotsvaga mafaro vakanyatsodzidziswa uye nekurangwa.
Chero michina inoshandiswa kuchengetedzeka senge mabhanhire uye mabhandi ekuchengetedza akagadzirirwa kune epamusoro matanho uye anoedzwa nguva nenguva. Hapana chinhu chinosiiwa netsaona uye kana paine kakangofanana sedambudziko nekuda kwenzvimbo dzisingatarisirwi dzemamiriro ekunze, kukwezva kunovharwa kwechinguva. (p.
Matanho akadaro ekuchengetedza chinhu chakakosha, nekuti chero tsaona isingafanoonekwi inogona kutungamira kune zvakakomba uye zvakakomba mhedzisiro yekutonga uye kunyange kuvhara kukwezva.
Saka zvakadini nechitima chedu?
Kukwezva kweSri Lankan kumusoro kwechitima kukwira chitima (kazhinji pakati paNanu Oya naElla - chikamu chinoyevedza) inyaya yekuti mushanyi anogona kumira pabhodhi regedhi rakavhurika rechitima chemota uye anonzwa mhepo inotonhorera kumeso kwavo paanenge achifema nyika yakanaka yezvikomo neminda yetii. Ichi chinhu chakashanyirwa nevashanyi vazhinji vekumadokero kumba, uko kwese masitima echitima echitima anongoerekana avharwa kana chitima chikatanga kufamba.
Muchokwadi ndinoudzwa kuti vamwe vamiriri vevashanyi muAustralia vanonyatsokumbirwa nevashanyi kuti vavarongere chiitiko ichi, pavanenge vachitsvaga kushanya kwavo.
Saka wadii kugadzira uye nekuita kukwezva kwakakodzera kubva pane izvi?
Hatigone here kugadzirisa chingoro chimwe chete kuti chive nemhanza yakavhurika padivi apo munhu anogona kumira panze uye nekunzwa nharaunda yakavhurika? Inogona kuve yakafanira neyakakodzera yekuchengetedza njanji uye munhu wega wega anogona kusungirirwa kune yekutakura ine harness (senge iyo inoshandiswa mune zvimwe zvinokwezva uko kudyidzana kwakavhurika kune izvo zvinhu). Mari yakakosha inogona kubvisirwa chiitiko ichi.
Chimwe chinhu chinofarira kuchengetedzeka ndechekuti panguva yekuyambuka nzvimbo iyi, nekuda kwekukwirisa, chitima chinofamba nemhanho yehozhwa, kusiyana nedzimwe nyika dzekunze uko kumhanya kunogona kusvika 80-100 kms paawa.
Kukwezva uku kunogona kushandiswa seyakagadzira mari yeDhipatimendi reNjanji sezvo vashanyi vanoda kuona kunakidzwa uku vanogona kubhadhariswa muripo, kwenguva yakati rebei yavanogona kushandisa nzvimbo iyi.
Kunyangwe izvi zvingaite senge zvakapusa, muchokwadi panogona kunge paine nyaya dzinoverengeka dzinoda kugadziriswa.
Asi kana paine kuda, uye madhipatimendi akasiyana anobatanidzwa anogona kuona mukana iwoyo, vosvika pakureba kumwechete, vachicheka kuburikidza nehurongwa husina kujairika hunowanzo kukunda, saka zvirokwazvo hazvizove zvakaoma.
Asi chirevo chizere muchibvumirano chose ichi, ndechekuti isu tinofanirwa kufunga kunze kwebhokisi uye tinzwisise mikana ingangoitika iripo, kunyanya patinenge tichivhurira vashanyi mushure mechirwere ichi. Isu tatojaira kupaza uye kubiridzira pamusoro pezvikanganiso zvese zvinokunda. Asi pane zvakawanda izvo zvinogona kuitwa kana paine vashoma vanokurudzirwa uye vakazvipira vanhu vanogona kuungana.
Tourism mushure mezvese inonyatsoratidza mabhizinesi uye pasina kugona, panache, vatambi, uye kuratidzira, chii chinonzi bhizinesi rekuratidzira?